Manao izay vitany ny Plateforme de la société civile miaro ny zaza - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mandray ireo fitarainana avy amin’ireo hiaran’ny herisetra ara nofo (victime) na koa avy amin’ny ray aman-dreny na koa avy amin’ireo tompon’andraikitra toy ny sefo fokontany rehefa tranga na herisetra mihatra amin’ny ankizy izy ireo. « Ny resaka fanolanana sy ny fanararaotana ara-nofo na exploitation sexuelle, vohoka alohan’ny loatra, indraindray koa misy ny zaza miasa, ny zaza very, tsy hita, tsy manana ray aman-dreny. Ireo no tranga efa hitanay nandritra izay volana vitsivitsy nitsangananay izay » hoy Rtoa Randrianasolo Haingo filohan’ny Plateforme de la société civile ao Toliara.
Miara miasa amin’ireo rafitra samihafa
Tsy miasa irery ny Plateforme fa miara-miasa amin’ireo tompon’andraiki-panjakana sy tsy miankina ao Toliara, ny polisy, ny Centre Vonjy, ny ao amin’ny tribonaly.
Centre Vonjy no mandray ireo niharan’ny herisetra.Tsy dia nahazoana vaovao ny ao amin’i Centre Vonjy ao Toliara io kanefa dia zava-dehibe amin’ny ady atao tahaka izao ny fahazoan’ny rehetra ny vaovao marina.
Miara miasa amin’ireo rehetra ireo izahay dia midina ifotony rehefa mahazo fiantsoana. « Tamin’ny farany teo dia ilay niharan’ny fanolanana mihitsy no tonga taty aminay nitondra ny fitarainany » hoy ny Plateforme. Te hiaro ny zandriny ity nitaraina satria mbola manana zandry roa izy ka ny iray izay fito taona ihany koa dia tratra. Mitady ny fanampian’ireo plateforme izy mba tsy ho tafiditra amin’ny resaka prostitution infantile io zandriny io na tafiditra amin’io réseau io, izay réseau satria fantatra fa misy olona manao izany zavatra izany eto Toliara, ary maromaro ireo olona voatonona ao anatiny ao. Raha ny tarehimarika eto am-pelatananay dia eo amin’ny 19 eo ho eo ny anaran’ankizy efa victimes an’io, ankizy eo anelanelan’ny 7 ka hatramin’ny 14 taona, ankizivavy izy ireo, zanaka olona mahantra, kamboty, mpangataka eo anelanelan’ny Toliara sy Mangily.
Na dia eo aza ny Plateforme dia misy ihany koa ireo miaraka amin’ireo mpanao ratsy no mampitahotra ireo ankizy mba tsy hilazany ny marina. Voatery natao amin’ny toerana azo antoka moa ireo ankizy mba hiarovana azy ireo. Ny Plateforme no mikarakara izany. Raha ny filazan’ireo ankizy ihany koa dia misy vehivavy malagasy mpitondra azy ireo any amin’ireo vazaha. Rehefa nojeren’ny Plateforme moa niaraka tamin’ireo mpitandron’ny filaminana dia tratra tao tokoa ny zazavavy telo tsy ampy taona hampihaonina amin’ireo vahiny ireo, tratra tamin’izany koa lehilahy malagasy mampifoka zava-mahadomelina ireo zaza alohany handefasana azy ireo any amin’ireo tera-tany vahiny. Rehefa notononin’ireto ankizy ireto ny teratany vahiny miisa 16, ireo no voatonina fa mbola misy hafa koa namoahan’ny juge d’instruction didy fampisamborana.
Ny resaka fahasalamana dia efa misy sahady no voan’ny vania, mamaly lava sy ireo aretin’ny firaisana amin’izao taonany izao, misy ary ny mitondra vohoka.
Tokony jerena tsara ny fampidirana vahiny eto amintsika.
Mila jerena ihany koa ireny vahiny mivahiny eto amintsika ireny. Nisy fotoana nalaza be ny ady tamin’ny fizahan-tany mamoafady. Ireto vazaha ireto dia olona saika efa retirety, mivelona amin’ny fisotroan-dronono. Izao iaraha-mahita izao ny ataony, tsy manampy fa vao mainka aza olana no aterany. Mila jerena izany satria ireo ankizy amin’izao fotoana ireo anie no handray andraikitra aoriana kely ao. Resaka ara-nofo no tena ahatongavany eto, fa tsy hampiasa vola hanatsarana ny toe-karena akory. Inona no vitan’izay 1000 euro ? Saingy miliba kosa izy manana an’io vola io eto amintsika. Dia izao manimba zaza tsy ampy taona izao.
Tsy mihemotra na misy aza ny fampitahorana
Mazava ho azy fa misy ny fampitahorana atao amin’ireo Plateforme. « Tsy hihemotra izahay. Fiarovana ny zaza malagasy no ataonay » hoy izy ireo. Marina izany tsy izy irery anefa no tokony hiaro ny zaza malagasy fa isika Malagasy rehetra tarihin’ny fitondram-panjakana. Tsy tokony hipetraka ho fahazarana fotsiny ny fahitana na fandrenesana zaza voaolana, fa mila ny fifanampian’ny tsirairay. Aza hadinoina fa ireo zaza ireo no handray andraikitra atsy aoriana kely atsy, ka asakasakao.
Farany renay tsiliantsofina fa tonga tany ny ambasadaorin’i Frantsa saika hiresaka tamin’ireo Plateforme. Tsy raikitra ilay izy, tsy fantatra ny antony. Hanampy antsika ve sa hiaro ireo frantsay ?